Hodges တက္ကသိုလ်မှ PET Hodges Connect » Hodges တက္ကသိုလ်သို့အကြောင်းကြား
Professional Training Initiative ဖြင့်လုပ်သားအင်အားကွာဟချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း - Hodges တက္ကသိုလ်မှ Hodges Connect ကိုကြေငြာခဲ့သည်
လုပ်သားအင်အားကျွမ်းကျင်မှုကွာဟချက်သည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းများသည်ဖြေရှင်းနည်းများကိုတောင်းခံနေကြသည်။ Hodges University မှထိုခေါ်ဆိုမှုအား ၄ င်း၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း၊ Hodges Connect ကို.
“ Hodges Connect ဟာဒီနေ့နဲ့မနက်ဖြန်ရဲ့အလုပ်ဈေးကွက်မှာအောင်မြင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့လုပ်သားအင်အားကိုပြင်ဆင်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားတာပါ” ဟု Hodges တက္ကသိုလ်မှဥက္ကDr.္ဌ Dr. John Meyer မှပြောကြားခဲ့သည်။ “ ဒီပလက်ဖောင်းအသစ်ဟာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ အတန်းများနှင့်အစီအစဉ်များကိုမည်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်မဆိုလိုက်ဖက်ပြီးတစ် ဦး ချင်းဖြစ်စေ၊ ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်သားအင်အားကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုပေးဖို့ပါ။
ဤလုပ်သားအင်အားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်များသည်အမျိုးမျိုးသောအရှည်များဖြစ်ပြီးသင်တန်းသားများကိုသူတို့နောက်တစ်နေ့တွင်အလုပ်လုပ်ရန်အသုံးချနိုင်သောကျွမ်းကျင်မှုများကိုပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၄ င်းတို့သည်တက္ကသိုလ်မှရိုးရာပညာရေးအစီအစဉ်များနှင့်သီးခြားစီဖြစ်ပြီးစိတ် ၀ င်စားသူမည်သူမဆိုယူနိုင်သည်။ ကျောင်း ၀ င်ခွင့်စာမေးပွဲစစ်ဆေးခြင်း၊ ယခင်ကောလိပ်အတွေ့အကြုံ၊ အထက်တန်းအောင်လက်မှတ်မလိုအပ်ပါ။
ပထမဆုံးအလုပ်ရုံဖြစ်သောပထမလိုင်းကြီးကြပ်ရေးမှူးလက်မှတ်အစီအစဉ်ကိုယခုရရှိပြီးမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုလက်ခံသည်။ ဒီအစီအစဉ်ကို Hodges တက္ကသိုလ်ပရ ၀ ုဏ်အတွင်းမှာဖြစ်စေ၊ အွန်လိုင်းအနေဖြင့်သော်လည်းကောင်းရရှိနိုင်သည်။
မည်သည့်ပုံစံကိုမဆိုပြီးဆုံးသွားသောအခါဘွဲ့ရများသည် Hodges တက္ကသိုလ်မှပထမလိုင်းကြီးကြပ်ရေးမှူးလက်မှတ်ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးလိုင်းကြီးကြပ်ရေးမှူးသင်တန်း?
“ ၂၀၁၁-၂၀၂၀ ခုနှစ်ဒေသတွင်း ၀ ယ်လိုအားအလုပ်အကိုင်စာရင်းသည်ဖွင့်ပွဲ ၄၀၀၀ ကျော်ရှိသည့်ပထမတန်းကြီးကြပ်ရေးမှူးများလိုအပ်ကြောင်းပြသနေသည်” ဟုဒေါက်တာ Meyer ကပြောကြားခဲ့သည်။
ပထမတန်းကြီးကြပ်ရေးမှူးများတောင်းဆိုသည့်Areရိယာများတွင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ထုတ်ယူမှုများ၊ စက်ပြင်စက်များ၊ တပ်ဆင်သူများနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်သူများ၊ လက်လီရောင်းဝယ်မှု၊ ရုံးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှု၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝန်ဆောင်မှု၊ လက်လီရောင်းချခြင်း၊ - စက်ပစ္စည်းနှင့်မော်တော်ယာဉ်အော်ပရေတာများကိုရွေ့လျားခြင်း။
PET Hodges ချိတ်ဆက်ပါ
PET Hodges Connect Initiative တွင်ထပ်တိုးအစီအစဉ်များရှိပြီးစက်မှုလုပ်ငန်း ၀ ယ်လိုအားအရရောင်းအားအသစ်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ထည့်ရန်အစီအစဉ်ရှိသည်။
အခြားရှိပြီးသားပရိုဂရမ်များတွင်နည်းပညာ၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စီးပွားရေးတို့တွင်ပျော့ပျောင်းသောကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအဓိကထားသောသင်တန်းငါးခုပါသောပရိုဂရမ်ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် (PEC) လည်းပါဝင်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်လက်မှတ်ရှိကျွမ်းကျင်မှု - ကျောင်းသားများကိုအလုပ်သင်အဖြစ် (သို့) ပထမဆုံးအလုပ်ရှာသူများကိုပြင်ဆင်ရန်တိုတိုသင်တန်းဖြစ်သည်။ ရရှိနိုင်သည့်အခြားအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတွင်လုပ်ငန်းခွင်၌မျိုးဆက်ကွဲပြားမှု၊ တန်းတူမှခေါင်းဆောင်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုတို့ပါဝင်သည်။ အချို့သောအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲခေါင်းစဉ်များမှာပconflictိပက္ခဖြေရှင်းခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာဘာသာစကားအခြေခံများ၊ သဘောတူသူဌေးတစ် ဦး၊ ၀ န်ထမ်းများလှုံ့ဆော်မှု၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်မြင့်မားမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောအဖွဲ့များ၊ လုပ်ငန်းခွင်၌လုံခြုံမှု၊ အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု၊
ကျန်းမာရေးကဏ္ PET တွင် PET Hodges Connect သည်အခြေခံဘဝအထောက်အပံ့၊ အခြေခံဘဝအထောက်အကူပြုမွမ်းမံခြင်းနှင့်နှလုံးရောဂါကုသမှုပထမအကြိမ်နှလုံးကြောဒဏ်ရာပြန်လည်ထူထောင်ရေးသင်တန်းများဖွင့်လှစ်သည်။ အလိုအလျောက်ပြင်ပ Defibrillator.
မကြာခင်မှာပဲ AUTOCAD နှင့် ADOBE Software အပါအ ၀ င်နည်းပညာနယ်ပယ်သစ်ကိုကမ်းလှမ်းလာသည်။
PET Hodges Connect နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအီးမေးလ်ပို့ပါ HodgesConnect@Hodges.edu သို့မဟုတ်အလည်အပတ်ခရီး Pathways.Hodges.edu/HodgesConnect.
Tags: #HodgesConnect, လေ့ကျင့်ရေး, လုပ်သားအင်အား